EndeavorOS Inosunungura Gumiguru Yakagadziriswa Shanduro muna Zvita | Linux Vakapindwa muropa
Pasi pemwedzi miviri yapfuura, timu yevagadziri pa EdzaOS yakatanga iyo Gumiguru vhezheni yako yekushandisa system. Kuvhurwa uku hakuna kuenda sezvaitarisirwa uye vakaunza chirwere muKalu chakavaita kuti vaite rimwe basa. Nechikonzero ichocho pakanga pasina yaNovember vhezheni yeiyo inoshanda sisitimu yaimbozivikanwa seAntergos uye izvo zvavakatangisa maawa mashoma apfuura zvinotorwa sekumisikidzwa kwaGumiguru, chaiko nguva ino.
Sezvatinoverenga mu kusunungura chinyorwa, ichi hachisi chikuru chiitiko. Muchokwadi, EndeavorOS inoshandisa iyo yekuvandudza modhi inozivikanwa se Kutenderera Kuburitswa, zvinoreva kuti, mushure mekutanga kuisirwa, tichazokwanisa kuisa zvese zvenguva yemberi zvehupenyu. Izvo zvavakaburitsa nhasi chifananidzo chitsva chekuisa nyowani chinogadzirisa iyo bug inoenderana neKalu, asi ivo vakashandisa iyo kuburitsa kugadzirisa mamwe mapakeji.
Iyo yazvino vhezheni ye EndeavorOS inosvika neFirefox 70
Pakati pemapakeji akagadziridzwa achitora mukana wekuburitswa uku, isu tine kernel Linux 5.4.1, Firefox 70.0.1 uye Mesa 5.4.1.
Nokuburitswa uku, tinogadzirisa nyaya iyi neKalu kugadzirisa mushure mekumisikidzwa. Ndosaka isu takabvisa Kalu uye tikatsiva neyedu yemukati EndeavorOS yekuzivisa notifier.. Muverengi anocherekedza anenge aona kuti hatichadaidzi kuburitswa kwaZvita. Tichiri kushanda pakuburitswa kwaZvita, kusunungurwa kwenguva pfupi uku kungogadzirisa nyaya yeKalu.
Kubva pakuonekwa kwayo, pachave nekumwe kuburitswa mwedzi uno muchimiro chemifananidzo mitsva yekutanga yekuisa, iyo yavanodaidza iyo december kusunungurwa. Ichisanganisira zvese zvaNovember izvo zvisina kuiswa mukuburitswa uku. Iyo EndeavorOS timu yekuvandudza haina kutaura kuti vachaburitsa riini Zvita, asi inofanira kusvika imwe nguva gore risati rapera.
Vashandisi vanofarira vanogona kutora EndeavorOS kubva Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » EndeavorOS Inosunungura Gumiguru Yakagadziriswa Shanduro muna Zvita
Zvakatora anopfuura mwedzi, asi Disney + yatove kushanda paLinux